तराईमा गोरु नहुनू, पहाडमा महिला भएर नजन्मनू ! - Nepal Readers
तराईमा गोरु नहुनू, पहाडमा महिला भएर नजन्मनू !
अरुणा उप्रेती। एक जना महिलाले हात जोडेर भनिछन्, ‘म मरेपछि मेरो लुगा नफुकालेर नै मलाई जलाई दिनुहोला।’ ‘किन र ? मृत्युपछि त लुगा फुकालेर, सफा गरेर मात्र चितामा राख्ने संस्कार छ । फेरि मृत्युपछि त तिमीलाई केही थाहा पनि हुन्न नि’ भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिइछन्, ‘मैले अहिलेसम्म लुकाएर राखेको मेरो खसेको पाठेघर सबैले देख्छन् अनि त मेरो आत्मालाई पनि शान्ति हुनेछैन त्यसैले।’
एक संस्थामा कार्यरत कल्पनाले मलाई उनको दुःखद कथा सुनाइन्।
यी सुदूर पश्चिमकी एक महिलाले जस्तै मृत्युपछि पनि आफ्नो खसेको पाठेघर देखाउन नचाहने, लाज र पीडाको भार बोकेर बसेका धेरै महिलाहरू नेपालमा छन्। तर तिनीहरूको कथाव्यथा सुन्ने र तिनलाई समाधान गर्ने फुर्सद र धैर्यता स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग छैन।
पहाड र तराईको महिलामा यस्ता वेदना थुप्रै छन्। कसैले पोख्छन्, कोही लुकाएर बस्छन् र त्यसैसँग चितामा जान चाहन्छन्। महिलाको पाठेघर झर्ने समस्याको बारेमा छलफल गर्दा उनीहरूको बेदनाको अर्थात पाठेघर खस्ने कारण वा मूल जरो खोज्न छाडेर केवल ‘पाठेघर खसेको समस्या मात्र’ समाधान गर्नुपर्छ भन्दै शल्यक्रिया गरिन्छ।
समस्या भएपछि शल्यक्रिया र उपचार त अवश्य नै चाहिन्छ। तर समस्याको जरो नहटाए आउँदा वर्षसम्म खसेको पाठेघरको शल्यक्रिया मात्रै गरेर समस्या सामाधान हुँदैन। पाठेघर खस्ने समस्या केवल औषधि, अस्पताल, शल्यक्रिया भएर मात्र ठिक हुँदैन। यसलाई महिलाको सामाजिक अवस्थासँग नै जोडेर हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय रोगको उपचार मात्र गर्न खोज्छ तर रोगको जरो निमिट्यान्न पार्न खोज्दैन।
गाउँघरमा त महिलालाई ‘गोरू जस्तै जोतेर’ काममा लगाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ। महिलाले कम खाए पनि हुन्छ भनेर बच्चा र किशोरी उमरेमा तिनीहरूलाई टन्न पोषिलो खाने कुरा खान पनि दिइन्नँ । यसरी किशोरीको शरीर कमजोर हुन्छ र यहीँबाट शुरू हुन्छ उनको पाठेघर झर्ने समस्या।
करिब १५ वर्ष अघिको कुरा हो, हामी अछामको मंगलसेनमा हिँडिरहेका थियौं। बाटोमा धेरै महिलाहरू सिमेन्ट बोकेर उकालो लागिरहेका देखिन्थे। त्यो बेलामा लाहुरे पुरूषहरू हातमा रेडियो लिएर सुन्दै थिए।
‘ओहो तपाईँहरू यस्तो सिमेन्ट लिएर ५–६ घण्टा हिँडेर आउनुभयो। गाह्रो हुन्न र?,’ ती श्रमिक महिलामध्ये एकलाई मैले सोधेँ। ‘गाह्रो भए पनि के गर्नु, हाम्रो जिन्दगी नै यस्तै छ,’ खुइय सास फेर्दै ती महिलाले जवाफ दिइन्।
त्यहीँ भेटिएका एक जना भद्र भलाद्मी जस्तो देखिने मानिसलाई सोध्यौं, ‘यति माथिसम्म यस्तो भारी ल्याउन त खच्चर लगाए पनि हुन्छ होला नि?’ रेडियो कानमा लगाएर, एउटा छाता ओडेर ती भलादमीले सहजै जवाफ दिए, ‘खच्चरले ल्याउँदा महंगो पर्छ। घरकै आइमाईहरूले बोके सस्तो पर्छ। फेरि यी महिलाहरूको खासै काम पनि त छैन। त्यति भारी त बोकिहाल्छन् नि।’
ती भलादमीको कुराले मन झसंग भयो। महिलाहरूको जीवनको मुल्य त खच्चरको भन्दा पनि कम रहेछ। यसरी सुदूर पश्चिममा महिलाले भारी बोकेको देखेरै भनिएको होला, ‘तराईमा गोरू नहुनू, पहाडमा महिला नबन्नू।’ खच्चडभन्दा बढी भारी बोक्नुपर्ने महिलाको सामाजिक मानसिकताले महिला, किशोरी, युवतीहरू गर्भवती हुँदा सुत्केरी हुँदा पनि कठोर शारीरिक काम गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ, अनि पाठेघर खसिरहन्छ।